Telecommunications Station Anundgård akaisa pasi – Ndichitarira shure pazuva remakore rakapfuura | Holmbygden.se
Telecommunications Station Anundgård akaisa pasi – Ndichitarira shure pazuva remakore rakapfuura
Posted on 16 Kukadzi, 2017 kubudikidza Holmbygden.se
Anund Manor huripo yenhare
Telecommunications Station Anundgård zvino ane "yakanakisisa pamberi zuva". Senzira phasing kunze pomumbure mhangura munyika zvino Telia vakasarudza kutora stationen ur drift efter 100 år i aktiv tjänst. The kuvhara chinobata subscribers zvose vane musha nvidia magazini Via runhare Jack, kana Telia kana mumwe opareta.
makore 2012 pakaziviswa kuti Telia wakaramba kuzomisa runhare yeredhiyo Loviken. Zvino ndiyo foni yemapurisa Ini Anundgård iyo zvino akamboona mazuva ayo akanakisisa. Sezvo dzimwe nzira yokukurukura pane kuburikidza yekare mhangura pomumbure yaakatorera pamusoro zvakawanda-uye-zvakawanda saka kuchengeta Telia Group kwemakore zvino muitiro dismantling yakare runhare exchanges vose vari hatichisiri vanoonekwa kunobatsira. Anundgård The chiteshi vachapiwa kuvharwa zvakanaka 2018-04-03.
itsva mikana, kusanganisira Holm Fiber
Nokuti vaya Pari vane musha dzorunhare nomukombiyuta zvakarukwa yemhangura uchida kuchengeta muri siyana mikana. Kana uchizopa kuwana faibha yakaiswa kuburikidza "Holm Fiber" (Obs! ripoti pano!) saka unogona kushandisa kubva chero opareta riri kusarudza Servanet (achavakira internet zimbabwe pamwe Holm Fiber).
An nzira kuva musha nvidia pamusoro faibha, nokuripisa “musha nvidia nomukombiyuta Mobile rezvebonde”. On Website kwayo, Telia ruoko allmän information med frågor och svar Reference kuvhara ("Networks Future") uye sina egna erbjudanden kana ukasarudza kugara (kana wemasaini kumusoro) Telia.
zvimwe, Telekområdgivarna mutakuri-kwazvakarerekera vatengi kuti anogona kubatsira yokugadzirisa zvinhu uye zvaunofanira kufunga usati kutenga magazini.
Anund Farm wokutanga yenhare yaiva muimba ino, izvo kwemakore uyewo dzichengeterwe bhizimisi.
Nhoroondo runhare exchanges Ini Anundgård
Bhuku yenhare yokutanga Ini Anundgård yakavakwa mukupera 1910s. The chiteshi akanga 50m kumabvazuva yanhasi yenhare (raiva 700m kumabvazuva chechi). Stationsbeteckningen panguva yakanga "Östbyn", Also wakaiswa chiteshi yakaderera Ini Anundgård. The "Chinyorwa kusuduruka" akanga yakapiwa zvikurukuru nokuda Holm kuti mushandi pachake, Maria "Maja" Hjerpe (Akaberekwa Viklund, 1912).
kumativi 1920 Kana nvidia Holm ari kuchangotanga, zvakanga, zvakanga baba Maja vake vokurera Pelle Haglund akaita chinja, asi kare 13 okuberekwa, aiva Maia akanga kutora pamusoro nokumhanya. Akazvipa vatarisire Chinyorwa giya kuchinja Holm kusvikira pakutanga otomatiki yemapurisa uye zvikuru ano runhare Namano raundi akatora pamusoro basa Holm, pakati 60 wacho.
Mufananidzo kuchitsinhanisa chechitima 40 there subscribers akatarisa nguva ino. Akafanana kuna Manor, Anund rokutanga giya akatarisa.
Pamberi kushandisa michina vakashanda saizvozvo kuti kana muchida kudana kwese hauna kutanga kutanga cranking foni uye kusimudza handset. Sezvo Maja "Anundgård" akapindura ari mumwe mugumo uye aifanira kukumbira kuti zvakabatana pa. Chingava kuti Zvingaitikawo kunzwa neapo guhwa iri mumusha kuburikidza basa iri.
picture t.v. kuona rimwe basa chibvumirano Maja kuburikidza makore, "Contract pamusoro kurapa Exchange yemapurisa pamwe kudaidzwa mudziyo kuruzhinji uye neteregiramu rwendo" kubva 1935. Ikoko, pakati pezvimwe zvinhu kuti yemapurisa yaizova rakazaruka söckendagar (mevhiki) pa 8-20. Kunze maawa avo waifanira kutsvaka dzimwe nzira yokukurukurirana kana aida kuwana abate munhu. Musi weSvondo, ravarwi yakavharwa rungwanani basa pa 10-13 uye Sunday chisvusvuro pa 16-18. Uyezve, zvifananidzo pazasi unogona kuona kuti remuneration basa sezvo mutungamiriri foni yemapurisa yaiva 40 SEK / gore uye magazini. Uye maererano "runhare" sezvo nhamba subscribers mu 1935 sezvo 15 there, iyo ichava pamwedzi muhoro ine chishoma 50 Kr.
(Click on mifananidzo kuti vakurise)
Nokuti vaya vasina runhare kumba saka akazoendawo kushanyira nokuchinja hofisi kana muchida runhare. On nzira yokubuda waifanira kubhadhara nokusiya 15 sendi ari dema pfuti sezvinoonekwa pamusoro mufananidzo pazasi. Chete mufananidzo aonawo bhuku Sweden akadini anonyora dating makore 1919. papeji 120 tinowana "Östbyn".
Maja akagara foni yokutanga hofisi upenyu. Pakupera rechi40 remakore akavaka kuvatsva Chinyorwa pamuchina wokugamuchira 100m mabvazuva. Nhasi wake mwanasikana anogara mukuru foni yemapurisa, apo mwanakomana wake anogara rechipiri-dangwe.
Anund Manor nokuchinja wechipiri pakati. Zvinokonzera hwindo kurudyi yaiva Chinyorwa giya, kamuri vakasiya izvozvo, unogona kudana dai yako foni kumba
Pakati pezana remakore 60s dzakavakwa otomatiki yenhare Holm wokutanga (Chivako hakusisipo), nguva ino pakati mbiri wo. Kumavambo 80 payakavakwa ari foni yemapurisa kushandiswa kusvikira nhasi. Pakati pezana / mukupera 90 raMwari, refu asati YouTube, Facebook uye Google akaona chiedza, zvakanga kuburikidza runhare yemapurisa sezvo vazhinji Holmbor akanga ake kuonana Indaneti.
Most dzaiwanzova kombiyuta pakombiyuta imwe akavaka “56 kbits-modem” izvo wakange chokuita foni Jack. Uye nenyasha ipapo anhonga foni apo akagara uye vakamirira maminitsi mashanu Web peji imwe yaigona vakaremerwa kukwira! Pamwe vakapfuura wokutanga, e-mail yako Anund Farm nokuchinja centre?
Zvinosuruvarisa kuti Holm vagari, saka haana akamuka ravarwi kuti upgraded pamwe zvikuru nokukurumidza ADSL-tekniken Raparurwa mukutanga 00 wacho, kana kana Telia kana mumwe opareta vaiona izvozvo zviripo. matsutso 2005 aiva kweva kubva yemasiraidhi kuti Anundgård chikoro uye ipapo vaivawo akabvunza Anundgårdsbor kana vaitofarira va-, izvo anenge 15 mhuri vakaita. Papera makore, kunyange Mobile 3G zvemichina, izvo zvaireva kuti vanhu vakawanda vakasiya wavo wekare dhayira-up Internet kwokubatana Via runhare Jack.
pashure anenge 40 Makore basa achaita Anund Farm kuchangobva runhare chiteshi kuti decommissioned
Zvingava nhasi makore akawanda kubva munhu wokupedzisira surfed ane "56 kbits Modem" vachishandisa runhare Jack, nepo muna ezvinhu aripo kuchiri kumativi 40 subscribers uchishandisa runhare Jack kuti musha nvidia kubudikidza Anundgård chiteshi.
zvisarudzo December 2016: Ichokwadi chinobatsira kuti faibha kuna Holm! Holmbygden.se
Holm Fiber Economic Association. Sign up pano!
Verenga zvakawanda pamusoro kuvhara / "ramangwana samambure". Telia.se
4G-tenzi kusvikira Holmbygden! Holmbygden.se
Aichinja foni- uye Broadband network, Post & Telecom Agency
Telia tisisiri wakaiswa nvidia muna Loviken 2012, Holmbygden.se